ဖေ့စ်ဘုတ်ခ် နည်းပညာ အင်ဂျင်နီယာ ဟောင်း Liu Jiakai သည် Baidu ၏ Xiaodu Technology နှင့်ပူးပေါင်း ခဲ့သည် – Pandaily
ဖေ့စ်ဘုတ်ခ် နည်းပညာ အင်ဂျင်နီယာ ဟောင်း Liu Jiakai သည် Baidu ၏ Xiaodu Technology နှင့်ပူးပေါင်း ခဲ့သည်
Jan 07, 2022, 19:19ညနေ 2022/01/08 02:07:47 Pandaily
အသေးစား ဒီဂရီ နည်းပညာတရုတ် အီလက်ထရွန်နစ် ကုမ္ပဏီကြီး Baidu ၏ ဌာနခွဲ သည် ၀ န်ထမ်း အပြောင်းအလဲ ကိုစတင်ခဲ့သည်။ Facebook Ace နည်းပညာ ပညာရှင် ဟောင်း Liu Jiakai သည် ကုမ္ပဏီ အား သူ၏ ထူးချွန်သော R & D ဗိသုကာ အဖြစ် တရားဝင် ၀ င်ရောက် ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ စီအီးအို အဲ ရစ် သို့တိုက်ရိုက် အစီရင်ခံ သည်။
အမ်ားျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြအရ လ်ဴ ဟာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ရဲ႕ အႀကီးတန္း နည္းပညာ အင္ဂ်င္နီယာ ေတြထဲမွာ ထိပ္ဆံုး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ၀ င်ရောက် ကတည်းက သူသည် ထုတ်ကုန် မျိုးစုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့်နည်းပညာ မူဘောင် များစွာ တည်ဆောက် ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီး ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် ဖေ့စ်ဘွတ် ခ် ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်တည်ထောင် ချိန်မှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရှိ သုံးစွဲသူ ၃ ဘီလီယံ ကိုဆက်သွယ် ပေးသော ပလက်ဖောင်း တစ်ခုသို့ လည်း ဖြတ်သန်း ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြု ခဲ့သည်။
Liu သည် Facebook messaging mid-range ၀ န်ဆောင်မှု ကိုဒီဇိုင်းဆွဲ ပြီး တည်ဆောက် ခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူ ၁ ဘီလီယံကျော် ကိုတိုးချဲ့ နိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် Messenger ကဲ့သို့သော ဆက်သွယ်ရေး အက် ပလီကေးရှင်း များအတွက် မက်ဆေ့ခ်ျ များ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ် ခြင်းနှင့် သိုလှောင် ခြင်း အတွက်လည်း အထောက်အပံ့ ပေးသည်။ ထို့အပြင် သူသည် စမတ်ဖုန်း ဟာ့ဒ်ဝဲ ထုတ်လုပ် သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ Facebook ၏ပထမဆုံး သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ဖြစ်သော Facebook Home တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ် ခ် သို့မ ၀ င် ခင် Jiakai Liu သည် Google တွင်အလုပ်လုပ် ခဲ့ပြီး စာအုပ် ရှာဖွေ ရေးနှင့် Picasaweb အတွက် Google China ၏ထိပ် တန်း ၀ န်ထမ်း ၅၀ တွင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Xiaodu Technology သည် Baidu ၏ Smart Life Group ဖြစ်သော စမတ် ဘဝ ဝန်ဆောင်မှု နည်းပညာ ထုတ်ကုန် ပံ့ပိုး သူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Baidu ၏ စမတ် အသံ နည်းပညာကို အစောပိုင်း စူးစမ်း လေ့လာခြင်း မှဆင်းသက်လာ ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် DuerOS ၏ ယခင် Duer ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လတွင် Baidu သည်၎င်း၏ Smart Life Business Group ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ DuerOS သည် စကားပြော သော အတု ထောက်လှမ်းရေး ဂေဟ စနစ်ကို တဖြည်းဖြည်း တီထွင် ခဲ့ပြီးနောက် DuSmart စပီကာ များနှင့် နားကြပ် များကဲ့သို့ သေးငယ်သည့် စမတ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ကိရိယာ များ ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaodu သည် အိမ်သုံး စမတ် ဖန်သားပြင် များအပါအဝင် ထုတ်ကုန် အသစ်များ ကိုမိတ်ဆက် ခဲ့သည်
Baidu ၏ စတုတ္ထ သုံးလပတ် ဘဏ္ financial ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ဒီဇင်ဘာလတွင် Xiaodu လက်ထောက် များ၏ လစဉ် အသံ ဆက်သွယ် မှုသည် ၆. ၂ ဘီလီယံ အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး DuerOS ဟာ့ဒ်ဝဲ ပစ္စည်းများ၏ လစဉ် အသံ ဆက်သွယ် မှုသည် Baidu မှ ထုတ်ပြန်သော အကြိမ် ၃. ၇ ဘီလီယံ အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး ယမန်နှစ် အလားတူကာလ ကထက် ၆၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ Xiaodu Technology သည် တတိယ သုံးလပတ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နံပါတ် တစ် စမတ် ဖန်သားပြင် များ တင်ပို့ ရောင်းချ ခြင်း၊ အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံ တိုးတက် ခြင်း၊ AI စွမ်းရည် များနှင့် ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ထားသော ကွန်ပျူတာ ချစ်ပ် များကြောင့် အကျိုးကျေးဇူး များရရှိခဲ့သည်။
DuerOS ကို အိမ်၊ ဟို တယ်၊ အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်း၊ ကား နှင့် ခရီးဆောင် ထုတ်ကုန် မြင်ကွင်း များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုခဲ့သည်။ DuerOS တပ်ဆင် ထားတဲ့ စမတ် ကိရိယာ သန်း ၄၀၀ ကျော် အသုံးပြု နိုင် ပါပြီ။ Xiaodu Technology တွင် မိတ်ဖက် အဖြစ် လူသိများသော ကုမ္ပဏီ ၅၀၀ ကျော်ရှိပြီး ဟိုတယ် အခန်းပေါင်း ၂၀၀, ၀၀၀ ရှိသည်။